MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2014-05-04
at 5/10/2014 07:32:00 PM No comments:
at 5/10/2014 07:22:00 PM No comments:
at 5/10/2014 07:13:00 PM No comments:
ရှမ်းမြောက် KIA တပ်မဟာ (၄)ဒေသတွင် SSA နှင့် အစိုးရတပ်တိုက်ပွဲ ဖြစ်
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း KIA,တပ်မဟာ(၄) ဒေ သ ဖြစ်သော နောင်တောင်း
ဒေသသို့ ထိုးစစ် ဆင်ကျူးကျော် ၀င်ရောက် လာ သော မြန်မာ အစိုးရ စစ်တပ်
နှင့် ၄င်းဒေသ တွင် လှုပ်ရှားနေသော KIA, ၏ မဟာမိတ် စစ်တပ် ဖြစ်သော SSA/sspp တို့ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
at 5/10/2014 07:09:00 PM No comments:
at 5/10/2014 07:08:00 PM 1 comment:
at 5/09/2014 03:11:00 PM No comments:
ဗမာအစိုးရတပ် တပ်မ(၈၈) လက်အောက်ခံတပ် ခမရ(၃၀၁) မှ အင်အား (၁၅၀) ခန့် ပါတဲ့ စစ်ကြောင်း မေလ (ရ)ရက် မနေ့ က ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ(၃) တပ်ရင်း (၂ရ) နယ်မြေ မန်ဝိန်း -ကောင်းခန်း တွင် စခန်းချထားသော အစိုးရတပ်စခန်း သို့အင်အားဖြည့်တင်းရန် ၀င်ရောက်လာကြောင်းသိရပါတယ်။ ရှမ်းမြောက် နမ့်ခမ်းဘက် မှ တက်လာသော စစ်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
at 5/09/2014 09:17:00 AM No comments:
လွတ်လပ်လို၍ စစ်တိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း KIA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်က မီဒီယာစာမျက်နှာ၌ တရားဝင် ပြောကြား
လွတ်လပ်ရေးလိုချင်၍ စစ်တိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လွတ်လပ်ရေးကို ယခုအချိန်တွင် သာမက နောင်တွင်လည်းရလိုကြောင်း ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) ၏ ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်က မီဒီယာစာမျက်နှာ၌ တရားဝင်ပြောကြား လိုက်သည်။
at 5/09/2014 09:16:00 AM No comments:
၂၀၁၄၊မေလ၊ ၈ ရက်နေ့ ယနေ့ (၁၂း၁၅) နာရီ အချိန် ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင် KIA, တပ်ရင်း (၂၇) ဒေသသို့ထိုးစစ်ဆင် ကျူးကျော် ၀င်ရောက်လာသော မြန်မာ အစိုးရ စစ်တပ် နှင့် KIA, တပ်ရင်း (၂၇) တပ်ဖွဲ့ တို့ အပြင်း အထန် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားနေ ကြောင်း KIA, ရှေ့တန်းအရာရှိများထံမှ သတင်းရရှိပါသည်။
at 5/08/2014 09:24:00 PM No comments:
at 5/08/2014 08:43:00 PM No comments:
at 5/08/2014 08:42:00 PM No comments:
at 5/08/2014 09:51:00 AM No comments:
at 5/08/2014 09:50:00 AM No comments:
at 5/08/2014 09:48:00 AM No comments:
at 5/08/2014 09:46:00 AM No comments:
ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း ကျိုင်းတုံမြို့မှာ အပစ်ရပ် ထားတဲ့ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် တောင်ပိုင်းရဲ့ ဆက်ဆံရေးရုံး ကို အစိုးရဘက်က လက်နက် ကိုင် တပ်တွေ အပါအ၀င် လူအင်အား ၂၀ ကျော်နဲ့ အင်္ဂါနေ့က ရှောင်တခင် ၀င်ရောက် ရှာဖွေ စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။
နှစ်ဘက် အပစ်အခတ် ရပ်စဲစဉ်က ဆက်ဆံရေးရုံးတွေကို ၀င်ရောက်မယ် ဆိုရင် ကြိုတင် အသိပေးဖို့ဆို တာ ပါရှိထား တာကြောင့် အခုလို ရုတ်တရက် ၀င်ရောက်တာဟာ နှစ်ဘက် ယုံကြည်မှုကို ပျက်ပြားစေနိုင်ကြောင်း ရှမ်းပြည် တပ်မတော် တောင်ပိုင်းရဲ့ ကျိုင်းတုံရုံး တာဝန်ခံက ပြောပါတယ်။ သတင်း အပြည့်အစုံကို ဗွီအိုအေ မြန်မာ ပိုင်းရဲ့ သတင်းထောက် ကိုမိုးဇော်က သတင်းပေး ပို့ထားပါတယ်။
at 5/08/2014 09:44:00 AM No comments:
at 5/08/2014 09:39:00 AM No comments:
at 5/08/2014 09:33:00 AM No comments:
"အစိုးရဝန်ထမ်းနှစ်ဦးကို မေ ၆ ရက်ညနေ ပြန်မလွှတ်လျှင် အင်အားသုံးမည်ဟု တပ်မတော်က ကေအိုင်အေသို့ အကြောင်းကြား"
ဖမ်းဆီးထားသော အစိုးရဝန်ထမ်းနှစ်ဦးကို မေလ ၆ ရက် ညနေ ၆ နာရီ နောက်ဆုံးထား ၍ ပြန်လွှတ်ပေးရန်နှင့် မလွှတ်ပေးပါက အင်အားသုံးဆောင်ရွက်ရ မည်ဖြစ်ကြောင်း မြောက်ပိုင်း တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် (မပခ)တိုင်းမှူးက ကေအိုင်အေသို့ အကြောင်းကြားထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မပခ တိုင်းမှူးက အထက် ပါ အတိုင်း အကြောင်းကြားထားပြီး ယင်းဝန်ထမ်းနှစ်ဦးကို ကေအိုင်အေက ဖမ်းဆီးထားသည်မှာ သေချာပါက ပြန်လွှတ်ပေးမည်ဟု အကြောင်းပြန်ထားကြောင်း ကေအိုင်အိုအလုပ်အဖွဲ့ (TAT)ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဒေါင်ခါးက ပြောသည်။
at 5/08/2014 09:31:00 AM 1 comment:
ကချင်စစ်ပွဲများ သန်းခေါင်စာရင်း နှင့်ပတ်သက်ဟု ဦးအောင်မင်းဆို
ဧပြီလအတွင်းက ကချင်ပြည်နယ် တွင် ဖြစ်ပွားသောတိုက်ပွဲများသည် သန်းခေါင်စာရင်းကောက် ရင်းဖြစ်သည့် တိုက်ပွဲများဖြစ်သည် ဟု ပြည်ထောင် စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းက မေ ၅ ရက် တွင် မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ၌ မီဒီယာများနှင့်တွေ့ ဆုံစဉ် ပြောသည်။
သန်းခေါင်စာရင်းကောက် ယူရာတွင် လုံခြုံရေးယူရန် ဟုဆိုကာ ရောက်ရှိလာ သည့် တပ်မတော်၊ တပ်ခွဲများ နှင့် ကေအိုင်အေတပ် များသည် မန်စီမြို့နယ် အတွင်း ဧပြီလ ၁၀ ရက် က တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည် ဟုလည်း ကရုဏာ အသင်းတော်မှ ဖာသာများ က မဇ္ဈိမကိုပြော ထားဖူးသည်။
at 5/07/2014 04:25:00 PM No comments:
at 5/07/2014 04:24:00 PM No comments:
at 5/07/2014 04:14:00 PM No comments:
at 5/07/2014 09:08:00 AM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် တွင် ကချင် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA)နှင့် မြန်မာ အစိုးရ စစ်တပ်များ အကြား တိုက်ပွဲ များ ဖြစ်ပွား နေမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သူ သမ္မတရုံး ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းနှင့် KIA မှ တာဝန်ရှိ သူများ မြစ်ကြီးနားမြို့ တွင် မေလ ၁၃ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့အထိ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး မည်ဖြစ်ပြီး အစိုးရ စစ်တပ်မှ အရာရှိများ တက်ရောက် မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရ သည်။
at 5/07/2014 09:06:00 AM No comments:
at 5/07/2014 09:04:00 AM No comments:
at 5/06/2014 01:30:00 PM No comments:
အာဏာရှင် လက်စွဲကျမ်း "တိုင်းပြည်ကို ဘယ်လိုသွေးစုပ်ရမလဲဆိုသည့် အကြံပေးချက် (၁၀)ချက်"
ယခုသတင်းစာ ကိုဖတ်နေသူ သာ အာဏာရှင်တစ်ဦး ဆိုလျှင် ဒီကနေ့ သင် ကံကောင်းသောနေ့ ဖြစ် သည်။ မြန် မာနိုင်ငံမှာရေး သားပြုစုပြီး နိုင်ငံတကာ ကိုဖြန့်ချိမည့် ‘အာ ဏာရှင် လက်စွဲကျမ်း’ ကို သင် အခမဲ့ မြည်းစမ်း ခွင့်ရတော့ မည်။ အောက် မှာဖော်ပြထား သည့် (၁၀) ချက်သည် မန္တလေး မှာ ထိုးမုန့် မဝယ်မီ အမြည်းပေး သလို စာအုပ် ထဲမှာ ပါမည့် အကြောင်းအရာများကို အမြည်းပေးခြင်းဖြစ်ပါ သည်။
at 5/06/2014 10:30:00 AM 1 comment:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Sinpraw Ginwang KIA Dap Ba (3) npu, Dap Dung (27) Ginra rai nga ai Pungling Dingsa kaw May (6) ya jahpawt jau jau ten kawn laja lana gap gasat nga ai lam shiga na chye lu ai. Myen hpyen ni hpyen n gun kaba hte htu gasat wa ai majaw Dung (27) niashara rai nga ai Pungling Dingsa hpe yen kau ra mat sai lam hpe mung na chye lu ai.
at 5/06/2014 10:24:00 AM No comments:
Pung Ling mare dingsa kaw Myen hte KIA gasat poi byin.
KIA Masat (3) Dap Ba n pu, Dap Dung (27) ginra, Pung Ling mare dingsa kaw, 2014 ning May (5) ya jahpawt hkying (06:45)am aten kaw nna hkying (07:30)am aten laman Dap Mying n chye ai myen hpyen hpung hte KIA Masat (27) Dap Dung na hpyen hpung ni gasat poi byin nna, shani hkying (01:15)pm aten daram hta mung numdaw kalang bai gasat poi kahtap byin ai lam hpe chye lu ai.
Ndai shara hta sha May (4) ya shani, Myen Hpyen Dap hpyen hpung hte KIA hpyen hpung ni gasat poi laja lana byin ai lam hpe mung, matut nna chye lu ai.
at 5/06/2014 10:23:00 AM No comments:
စစ်တပ်မှ ငြင်းဆိုသော်လည်း ဒုက္ခသည်တဦး ဖမ်းစီးခံထားရဆဲဟု ကချင်အဖွဲ့များဆို
အစိုးရစစ်တပ်၏ ဖမ်းစီးခြင်းခံထားရသော ကချင်ပြည်နယ်၊ မန်စီမြို့နယ်၊ မန်ဝိုင်းကြီးကျေးရွာအနီး လဂတ်ယန် ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဒုက္ခသည် ၁၄ဦးကို အစိုးရတပ်မှ ပြန်လွတ်ပေးခဲ့သော်လည်း တစ်ဦးကို ပြန်လည် ဖမ်းဆီးထားသည်ဟု ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီ၏ အကြီးတန်းအရာရှိ ဦးလမိုင်ဂွမ်ဂျာက မဇ္ဈိမကို မေလ ၅ရက်တွင် ပြောသည်။
မေလ၃ရက် ညနေ၄နာရီကျော်က အဆိုပါ လူ၁၄ဦးကို ခမရ၈၈မှ တပ်ရင်းမှူးကိုယ်တိုင် လဂတ်ယန် ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ လာရောက်၍ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မေလ ၄ရက် ၃နာရီခွဲခန့်တွင် ပြန်လည် လွှတ်ပေးခဲ့ကာ လွတ်မြောက်လာသူများထဲမှ တစ်ဦးကို ညနေ ၆နာရီခွဲကျော်တွင် ပြန်လည် ဖမ်းစီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
at 5/06/2014 09:36:00 AM No comments:
at 5/06/2014 09:35:00 AM No comments:
at 5/06/2014 09:30:00 AM No comments:
at 5/06/2014 09:24:00 AM No comments:
တပ်မတော်စစ်ကြောင်း ပစ်ခတ်မှု ဗန်းမောက် ဒေသခံတစ်ဦးသေဆုံး
တပ်မတော်စစ်ကြောင်းမှ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဗန်းမောက်မြို့နယ်တွင် ဧပြီ ၁ ရက် ည ၈ နာရီခွဲခန့်က ဒေသ ခံရွာသားတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့သည်ဟု ဗန်းမောက်မြို့နယ် အမှတ်(၁) မဲဆန္ဒနယ်မှ စစ်ကိုင်းတိုင်း အမတ် ဦးအောင်ရွှေက ပြောသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကသာခရိုင်၊ ဗန်းမောက် မြို့နယ်၊ နန်းမားကျေးရွာအုပ်စု၊ နန်းအော့ကျေးရွာ အမကကျောင်း ဝင်းအတွင်းတွင် ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
at 5/05/2014 03:37:00 PM No comments:
at 5/04/2014 10:46:00 PM No comments:
မြန်မာအစိုးရတပ် ဂျက်ဖိုက်တာ KIA တပ်မဟာ(၄)နယ်မြေပေါ်တွင် လှည့်လည်ပျံဝဲ
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ(၄) ရင်း (၃၆) (၃၈) နယ်မြေ မုန်ဂူ ၊ လွိုင်ဂျော်ဘွမ် ၊ ယိန်းလှတောင် ၊ ဘန်လွမ်ဘွမ် စသည့် ကျေးရွာပါတ်ဝန်းကျင် နှင့် တောင်ကြော များ ပေါ်တွင် အစိုးရတပ် ဖိုက်တာဂျက် လေယာဉ်တစ်စင်း မနေ့ က မေလ (၂)ရက်နေ့မနက် (၁၀း၀၀)နာရီ ခန့် တွင် လှည့်ပတ် ပျံဝဲနေကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ ရှိသူ ဒေသ ခံများ ပြောသည်။
ဒေသခံများ ပြောကြားချက်အရ အဆိုပါနယ်မြေ ထဲတွင် မြန်မာတပ်ရင်းအင်အား ထောင်ချီ နေရာချထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း အကယ်၍ စစ်ဆင်ရေးတွင် လေယာဉ်အသုံးပြု ရန်လိုအပ်လာပါက မိမိတပ်များ အားရှောင်ကွင်းနိုင်ရန် နှင့် စစ်ဆင်ရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
at 5/04/2014 11:30:00 AM No comments:
at 5/04/2014 11:23:00 AM No comments:
ဒုက္ခသည် စခန်းမှ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်အမျိုးသား (၁၄)ဦးအား တပ်မ(၈၈) မှ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွား
(၃.၄.၂၀၁၄)ရက်နေ့ နေ့ လည် (၂း၀၀)နာရီ ခန့် ၌ မန်ဝိန်းကြီး တွင် စခန်းချနေသော မြန်မာတပ် တပ်မ(၈၈)လက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့ ဝင် များ လဂတ်ယာန် ဒုက္ခသည် စခန်းသို့ ရောက်ရှိလာပြီး စခန်းတွင် ခိုလှုံနေသူ အမျိုးသား (၁၄)ဦးအား အကြောင်းမဲ့ ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း သိရှိရသည်။ ဖမ်းဆီးခံရသူများတွင် ဘာသာရေး သင်းထောက်ဆရာ တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဆရာဦး ဇခုန်ယော်ထုန် လည်းပါသွားကြောင်း သိရသည်။
at 5/04/2014 11:22:00 AM No comments:
at 5/04/2014 11:20:00 AM No comments: